Izinsiza Zokuzivikela, Izinsiza Ezihlobene zeBioaerosol - uJunray
Sinikeza Imikhiqizo Engcono Kakhulu yekhwalithi
I-Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd. yasungulwa ngo-Agasti 2007. Kuyibhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obusha eligxile ku-R & D yamathuluzi wokuthola. Sinikezela ngezinsiza nezinsiza zokutholwa eziphephile nezithembekile ekuqapheni imvelo, ukuphepha kokudla, ukukala kanye nokulinganisa.
I-Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd inenqubo nekhono eliphelele lephrojekthi ye-R & D, manje ineminyango eyi-8 kufaka phakathi ubuchwepheshe, ilabhorethri, imishini, ukwakhiwa kwemboni, inqubo yokukhiqizwa kwesivivinyo, enabasebenzi abangaphezu kwama-90.
I-ZR-2021 Isampula yesampula yokugeleza okukhulu okuhamba emoyeni isetshenziswa ekuqoqweni kwamagciwane asemoyeni.
I-ZR-2050A sampler microbe sampler iyinhlangano esebenza kahle kakhulu esiteji esisodwa isampuli yokuvula umgodi eminingi.
I-ZR-1013 isivivinyo sekhwalithi yekhabethe yokuhlola i-ZR-1013 Biosafety ikhwalithi yekhabhinethi yokuhlola
12 2021. UJan